Duufaanta Lan ayaa kusii socota Japan | Saadaasha Shabakadda
Jabaanku waxay isu diyaariyaan imaatinka duufaan lan.
Lan, oo hadda haysta dabeylo xaddigeedu dhan yahay 167 kiilomitir saacaddiiba, iman doonaa jasiiradaha on Sunday, maalinta la qorsheeyay in la qabto doorashooyinka.
1 Muxuu noqon doonaa dhabbaha Lan?
2 Dhaawac noocee ah ayuu keeni karaa?
Muxuu noqon doonaa dhabbaha Lan?
Sawir - Cyclocane.es
Lan waa duufaan ka curtay bariga Taiwan Oktoobar 16, 2017. Berri, Sabti, waxaa la filayaa inay soo gaarto Okinawa, oo ay kusii socoto jihada waqooyi-bari inta ay xooggeedu lumayso oo ay noqonayso duufaan ka baxsan. Ugu dambeyntiina, Talaadada waxaa la rumeysan yahay inuu ka guuri doono waddanka Japan.
Labadan sawir waxay ku kala caddaan doonaan:
Meesha suurtagalka ah ee Duufaanta Lan Axadda, Oktoobar 22:
Meesha suurtagalka ah ee Duufaanta Lan Talaadada, Oktoobar 24:
Dhaawac noocee ah ayuu keeni karaa?
Cawaaqibta Typhoon Lan waxay noqon kartaa mid aad u daran. Japan waxay isu diyaarisaa sidii ay u sugi lahayd imaatinka roobab culus iyo dabaylo, kuwaas oo xitaa ka xoog badnaan kara sida ay hadda yihiin. Inta badan Kyushu, Shikoku iyo Honshu waxay waxyeelleyn kartaa geedaha iyo dhismayaasha, sidoo kale waxay sababi kartaa koronto fara badan.. Intaa waxaa sii dheer, daadad xeebeed iyo qulqulatooyin ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan xeebta Baasifigga ee jasiiradahan.
In kasta oo xilli duufaantii Atlantika ay ahayd tii ugu mashquulka badnayd, haddana xilligii duufaantii Baasifigga waxay ahayd mid deggan illaa iyo dhowaan. Laga bilaabo Oktoobar 16, kaliya kalabar oo ka mid ah duufaannada kuleylaha ee la saadaaliyay ayaa sameysmay; iyaga ka mid ah, waxaa jiray kaliya hal duufaan aad u weyn: Noru, dhammaadka Luulyo.
Waxaan si dhow ula socon doonnaa Duufaanta Lan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Lan ayaa ku sii socota Japan